ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုသေချာစွာဖတ်ရွတ်ခြင်း l6 | Dam Mang
နိုဝင်ဘာ ၂ – ၈
ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း နိုဝင်ဘာ ၂
ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ နေဟမိ ၈း၁-၈။ တရားဟော ၃၁း၉-၁၃။ မဿဲ ၁၇း၅။ တမန်တော် ၈း၂၆-၃၈။ နေဟမိ ၈း၉-၁၂။ ဝတ် ၂၃း၃၉-၄၃။
‘ထိုသို့ဘုရားသခင်၏ပညတ္တိကျမ်းစာကို သေချာစွာဖတ်ရွတ် ၍ အနက်ကိုပြန်သဖြင့် လူများနားလည်စေခြင်းငြှာုပကြ၏’ (နေဟမိ ၈း၈)။
ယေရုရှလင်ြုမိ့ရိုးလည်းတည်ဆောက်ပြီးပြီ။ြုမိ့တံခါးများကို သေချာ စွာတပ်ဆင်ထားပြီ၊ ဣသရေလလူမျိုးတို့သည် နေဟမိ၏ဦးဆောင်မှုအောက် ၌ တာဝန်များကျေပွန်စွာဆောင်ရွက်ကြသည်။ြုမိ့ရိုးကြီးပြီး စီးကြောင်းကို ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတစ်ပါးအမျိုးသားများမြင်တွေ့ကြလျှင် ‘ထိုအမှုသည် ဘုရားသခင် အခွင့်နှင့်ပြီးကြောင်းကို ရိပ်မိကြ၏’ (နေဟမိ ၆း၁၆)။ ရန်သူတို့သည် ဣသရေလ၏ဘုရားသည် စစ်မှန်ကြောင်းကိုရိပ်မိလာသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်၊ ဆန့်ကျင်မှုအပေါင်းကိုပမာမထား၊ မုန်းတီးမှုများကိုဂရုမထား ဣသရေလလူမျိုးများသည် မိမိတို့ချမှတ်ထားသောလုပ်ငန်းကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။
ြုမိ့ရိုးကိုတည်ဆောက်ပြီးသည်နှင့် နေဟမိသည် ယေရုရှလင်ြုမိ့၏ြုမိ့ဝန်ရာထူးကို ရဲတိုက်မှူးဟာနနိကိုခန့်ထားလိုက်သည်။ ထိုနောက် သူ၏ညီ ဟာနန်ကိုလည်း ရဲတိုက်မှူးရာထူးကိုခန့်အပ်လိုက်သည်။ ထိုသူနှစ်ဦးကိုရွေးချယ် ရာ၌ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရား ကိုအလွန်ရိုသေကိုးစားသူများဖြစ်ကြသည်။ (နေဟမိ ၇း၂)။ ထို့အပြင် မျိုးရိုး ကောင်းသူလည်းဖြစ်ကြသည်။ြုမိ့ရိုးသည် ‘ဧလုလ’ လ တွင်ပြီးစီးသည်။ ဆဌမလမြောက်လဖြစ်သည်။ (နေဟမိ ၆း၁၅)။
ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မည့်သည့်အရာကျန်နေသေးသနည်း။ ဆက်လက်လေ့လာမည့် နေဟမိမှတ်စာ (၈-၁၀) သည် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို သတ္တမလ (Tishri) (နေဟမိ ၈း၂) တွင်ချမှတ်လုပ်ဆောင် သည်။ ထိုကျမ်းချက်အရ၊ ဣသရေလလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ် ထွက်စကားကို မည်မျှလေးစားနာခံ၍ ထိုနှုတ်ကပတ်တော်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ကို မြင်တွေ့ရသည်။
တနင်္ဂနွေ နိုဝင်ဘာ ၃
နေဟမိ ၈း၁၊၂ ကိုဖတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်တော်ထွက်စကား သည် လူတို့အတွက်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းကို မည်သို့ပြောကြားထားသနည်း။
ယုဒလူတို့သည် ယေရုရှလင်ြုမိ့ရိုးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးစီး ပြီးသည့်နောက် ယေရုရှလင်ြုမိ့တွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။ လူအားလုံး တို့သည် ယေရုရှလင်ြုမိ့၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ကွင်းကြီးထဲ၌ သတ္တမလတွင်စုရုံး လာကြသည်။ သတ္တမလသည် (Tishri) လဟုအမည်ရသည်။ ထိုလသည် ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် အလွန်အရေးပါသောလဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ တံပိုးမှုတ်ပွဲကျင်းပသောလလည်းဖြစ်သည်။ (လ၏အစပထမရက်ကို ဘုရားရှင် တရားစီရင်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း) အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ လ၏ (၁၀) ရက်မြောက်နေ့ကို အပြစ်ဖြေရာနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ တဲတော်ထိုးပွဲ တော်ကို (၁၅) ရက်နေ့မြှာုပလုပ်ပြီး၊ အဲဂုတ္တုပြည်ကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်လာ ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နှင့် တောထဲလှည့်လည်စဉ် ခံစားရသောဘုရားရှင်၏ကရုဏာ တော်ကို ရေတွက်ချီးမွမ်းသောပွဲဖြစ်သည်။ လူတို့သည် တဲမိုးမှုတ်ပွဲကျင်းပ သောလ၏ပထမနေ့၌ စုရုံးလာကြသည်။ ခေါင်းဆောင်ကြီးများတို့သည် ရှိသမျှယောကျာ်းမိန်းမများကိုစုရုံးစေပြီး အစီအစဉ်တကျစုရုံးစေသည်။ ပညတ် တော်ကိုဖတ်ရွတ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်အကြောင်းကိုသင်ယူလေ့လာခြင်းနှင့် ရာဇဝင် သမိုင်းများကို သင်ယူလေ့လာခြင်းမျာြးုပကြရသည်။
လူတို့သည် ဧဇရကိုခေါ်ဖိတ်ပြီး မောရှေရေးသားထားသောပညတ် တော်ကို ဖတ်ပြစေသည်။ စင်မြင့်နှင့်စကားပြောပလ္လင်ကိုလည်း တည်ဆောက် ကြသည်။ ခေါင်းဆောင်များစေခိုင်းလုပ်ဆောင်ရခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။ လူတို့ သည် ဧဇရကိုကျမ်းစာအုပ်ယူလာစေပြီး မောရှေရေးသောကျမ်းများကို စတင် ဖတ်စေပါသည်။ သိနာတောင်ပေါ်မှ မောရှေအားပေးခဲ့သောပညတ်တော်လည်း ပါဝင်သည်။
တရားဟောရာ ၃၁း၉-၁၃ ကိုဖတ်ပါ။ ထိုသူတို့ကို ဘုရားရှင် မည်သို့မိန့်တော်မူခဲ့သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သင်ခန်းစာမည်သို့ရယူနိုင် သနည်း။
တရားဟော ၃၁း၉-၁၃ တွင် မောရှေသည် ဣသရေလလူမျိုးများ ကိုပြောကြားရာတွင် တဲတော်ထိုးပွဲ၌ ထာဝရဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို ဖတ်ရွတ်ရန် စုရုံးကြရမည်ဖြစ်သည်။ ယောကျာ်း၊ မိန်းမ၊ ကလေးများနှင့် အခြားပြည်သားများ မိမိတို့အဖွဲ့ဖြင့်သီးခြားနေရာယူပြီး တံခါးအတွင်းတွင် နေရာယူကြရမည်။
နေဟမိ ၈း၁ ၏အဓိပ္ပါယ်အမှန်မှာ ]လူတစ်ဦးတည်းကဲ့သို့} ဖြစ်ရန် စုရုံးပေါင်းစည်းလာရမည်။ ယုံကြည်သူအစုအဝေး၌ စည်းလုံးခြင်းသည် မည်မျှ အရေးကြီးကြောင်း ပြောဆိုဆုံးမထားသနည်း။
တနင်္လာ နိုဝင်ဘာ ၄
ဧဇရသည် ‘ပညတ်ချက်တော်’ ကို လူထုကြီးရှေ့တွင်ဖတ်ပြရန် ယူလာသည်။ မည်သည့်ပညတ်ချက်ကိုဖတ်ပြခဲ့သနည်း။ ပညတ်တော် (၁၀) ပါးကိုသာ ထပ်ခါတလဲလဲ နေ့တစ်ဝက်ခန့်ဖတ်ပြခဲ့သည်။ ပညတ်ပေးချက် များကိုနားလည်ကြရန် မောရှေ၏ကျမ်းငါးကျမ်းကို ဖတ်ကြားနာယူစေခဲ့သည်။ ကမ္ဘာဦးမှတရားဟောရာကျမ်းဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ‘တိုရပ်’ (Torah) ကျမ်းဟု လူသိများသောကျမ်းဖြစ်၏။ ပညတ်ချက်ဟုခေါ်တွင်ရာတွင် ပညတ်ထားသော အချက်များ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်သည်။ ‘အကြံပေးချက်များ’ ဟုအနက် ပြန်ဆိုသော်၊ ပို၍သင့်လျော်မှန်ကန်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်လှမ်းသွားသော ပန်းတိုင် မယိမ်းမယိုင်မလွဲချော်သွားစေရန် ဘုရားရှင်မှသွန်သင်ထားချက်ဖြစ် သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဧဇရဖတ်ကြားစဉ် လူတို့သည် သူတို့ဆင်းသက်လာ သောရဇဝင်ကိုကြားရ၍ ဘုရားသခင်၏လူမျိုးဟု အတတ်သိခွင့်ရခဲ့သည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းအချိန်မှစ ယောရှု၏အချိန်တစ်လျှောက်အကြောင်းများကို တစ်ဆင့် ပြီးတစ်ဆင့် သိရှိခဲ့ရသည်။ ရာဇဝင်ကြောင်းများအပြင် သီချင်းများ၊ ကဗျာ စာတို၊ ကောင်းချီးပေးစကားနှင့်ပညတ်ချက်များ၊ ဘုရားရှင်၏နောက်တော်သို့ တစ်စိုက်မတ်မတ်ြုကိးစားလိုက်လျှောက်၍ ဘုရားရှင်မှ သစ္စာကတိတော်အတိုင်း သူတို့အားကာကွယ်စောင့်ရှောက်တော်မူကြောင်းကို ပြန်လည်သိရှိရသည်။ ‘တိုရပ်’ ကျမ်းတွင် ပညတ်ချက်များပါဝင်သော်လည်း၊ ယင်းထက်ပိုသော အကြောင်းများစွာရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏လူမျိုးများစည်းလုံးခြင်းနှင့် ဘုရားရှင် ပို့ဆောင်တော်မူခြင်းအကြောင်း အထူးသဖြင့်ရေးသားထားသည်။ အကျိုးဆက် အဖြစ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အခြေအမြစ်ခိုင်လုံကြောင်းကို ပေးစွမ်းသောကျမ်း ဖြစ်သည်။
နေဟမိ ၈း၃ ကိုဖတ်ပါ။ တရားဟော ၄း၁။ ၆း၃၊၄။ ယောရှု ၁း၉။ ဆာလံ ၁း၂။ သုတ္တံ ၁၉း၂၀။ ယေဇကျေလ ၃၇း၎ နှင့် မဿဲ ၁၇း၅ ကိုလည်းဖတ်ပါ။ ယင်းကျမ်းချက်များမှ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားရှင်၏နှုတ်ကပတ် တော်အား ဖတ်ကြားနာယူရန်မည်သို့သွန်သင်သနည်း။
ဧဇရသည် ယေရုရှလင်သို့ပြန်ရောက်ရှိလာချိန်မှစ၍ (၁၃) နှစ်တာ အတွင်း၊ နှုတ်တော်ထွက်စကားများကို ဖတ်ရွတ်သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် လူတို့ သည် ပို၍ပို၍ကြားနာချင်သောဆန္ဒများ တဖွားဖွားပေါ်ပေါက်စေသည်။ သူသည် ဘုရားရှင်၏အမှုတော်၌ဆက်ကပ်ကာ ထူးခြားပြောင်းမြောက်စွာလုပ်ဆောင် မည့် သန္နိဌာန်စိတ်ပြင်းပြသည်။ ဧဇရထံမှကြားရသမျှသော နှုတ်တော်ထွက် စကားများသည် သူတို့အတွက်လိုက်လျှောက်ကျင့်ကြံရန် အမှန်တရားတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ ရလဒ်အဖြစ် သူတို့သည် သာ၍သာ၍ကြားနာလိုသောစိတ် ဆုံးဖြတ်ချက်များရှိလာသည်။ အကြောင်းမှာ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလွန်စိတ် ဝင်စားအားကြီးလာကြသည်။ ထိုသို့အခြေအနေမျိုးရောက်လာသောအခါ၊ ‘တိုရပ်’ ကျမ်းကိုမြတ်နိုးရိုသေလျက် လေ့လာသင်ယူလိုစိတ်များ ပိုမိုခိုင်မြဲ လာကြသည်။
နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်နီးကပ်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင် နှင့်အတူနေထိုင်ရန် သာ၍နက်နဲသောအသက်တာကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
ဘုရားရှင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဘယ်ကဲ့သို့ပတ်သက် သနည်း။ ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပါသည်ဟု သင်ဆိုသည့်တိုင်၊ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအပေါ် သင်၏အသက်တာကိုမည်သို့ပေါ်လွင်မှုဖြစ်စေ သနည်း။ သွန်သင်ချက်အားလုံးကို သင်လိုက်နာလုပ်ဆောင်ပါမည်ဟု စိတ်ထဲ အကြံရှိနေသည်အတိုင်း အောင်မြင်မှုရှိပါသလား။ သမ္မာကျမ်းစာ၏သွန်သင် မှုကို နာခံခြင်းမရှိသောအသက်တာဖြစ်ခဲ့သော် မည်သို့သောအသက်တာမျိုးနှင့် အသက်ရှင်မည်နည်း။
အင်္ဂါ နိုဝင်ဘာ ၅
နေဟမိ ၈း၎-၈ ကိုဖတ်ပါ။ ပညတ်ချက်ဖတ်ကြားခြင်းကို မည်သို့ အဆုံးသတ်ခဲ့ကြသနည်း။
တစ်ဖွဲ့ကိုလူ (၁၃) ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့သည် နေဟမိ နှင့်အတူဖတ်ရွတ်ခြင်းကြိုပရန် အတူထလျက်နေကြသည်။ ပထမအဖွဲ့ပုဂ္ဂိုလ် (၁၃) ဦး (နေဟမိ ၈း၎)၊ ဘုရားရှင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကူညီဖတ်ကြား ရန်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအဖွဲ့ပုဂ္ဂိုလ် (၁၃) ဦးမှာ၊ (နေဟမိ ၈း၇) ဖတ်ကြား သမျှကို နားလည်သဘောပေါက်ကြရန် ပြန်လည်ရှင်းပြသည်။ ပြည့်သူ့ ရင်ပြင်၌ြုပလုပ်သော ဖတ်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ကို မည်သို့မည်ပုံအစီအစဉ်တကျြုပလုပ်ကြောင်းကိုမူ ကျွန်ုပ်တို့မသိရပါ။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အနေအထားမှာ ကူညီရွတ်ဖတ်ပေးသောပုဂ္ဂိုလ်များ၏လက်ထဲ၌ ‘တိုရပ်’ ကျမ်းကိုကိုင်ထား ကြဟန်ရှိသည်။ (ဟေဗြဲလူမျာြးုပစုသောကျမ်းစာလိပ်ကြီးများသည် အလွန် လေးလံပြီး ကူညီဖြန့်ပေးရသူရှိရသည်။) သို့မှသာ ဖတ်ကြားပေးသူအတွက် အဆင်ပြေစွာဖတ်ရွတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နံနက်ယံ မှမွန်းတည့်ချိန်အထိ ဖတ်ရွတ်လေ့ရှိကြသည်။ ရင်ပြင်ပေါ်ရှိလူအားလုံးမြင်တွေ့ ကြားနာရအောင် ပြသဖတ်ရွတ်ပေးရသည်။
နေဟမိ ၈း၈ ၌ပါရှိသောစကားစုမှာ ‘သေချာစွာဖတ်ရွတ်၍’ ‘လူများ နားလည်စေခြင်းငြှာုပကြ၏’ ကျမ်းပိုဒ်တိုင်းကို အနက်ပြန်ဆိုအဓိပ္ပါယ်ထုတ် ပေးသည်ဟု ယူဆရသည်။ တစ်ချိန်တည်ြးုပရသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ လူတို့ သည် ဗာဗုလုန်ပြည်မှပြန်လာကြသောကြောင့် နှစ်ပရိစ္ဆေဒများစွာကြာမြင့်ပြီး ‘အရမစ်’ စကားကိုသာ ပြောဆိုအသုံြးုပခဲ့ကြရာ၊ ဟေဗြဲဘာသာစကားဖြင့် ဖတ်ကြားခြင်းကိုကြားရလျှင် လူအများစုမှာ ကောင်းစွာနားမလည်နိုင်ဖြစ် နေသည်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များသည် နားမလည်ကြပါ။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ဖတ်ကြားပေးသူများအနေဖြင့် အနက်အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက် မှုရှင်းလင်းချက်ကို တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ြုပလုပ်ပေးရသည်။ ဟောကြားခြင်း နှင့်အတူ အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုဖွင့်ဆိုသောအခါ ကြားနာရသူများကို နိုးကြားစေကာ စိတ်ဝင်စားမှုပိုမိုခံစားရရှိ၍ ကိုယ်စီကိုယ်င မိမိတို့အတွက် သတင်းစကားများရရှိသွားကြသည်။
တမန်တော် ၈း၂၆-၂၈ ကိုဖတ်ပါ။ ပေးထားသောကျမ်းချက်အရ၊ ယေရုရှလင်ြုမိ့၌ မည်သို့သြောုပိင်တူကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသနည်း။ ကျွန်ုပ် တို့အတွက် မည်သည့်သင်ခန်းစာများရရှိသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ပရိုတက်စတင့်အားလုံးတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာကို ကိုယ်တိုင် ဖတ်၊ ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီး နားလည်သိရှိရမည်ဟု သဘောပိုက်ယုံကြည် ချက်ထားကြသည်။ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်၏လိမ်လည်နေခြင်း ကို ကျမ်းစကားအမှန်ဟုမယုံကြည်ရပါ။ အမိန့်ပေးအတင်းယုံကြည်စေခြင်း မျိုးကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့လက်မခံရပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ရှင်းပြပေးသူမရှိ သောကျမ်းချက်ကိုဖတ်ရသူအတွက် ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေနိုင်မည်လား။ ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်း မိမိ၏ယုံကြည်ချက်ကို အခြေခံကျကျနားလည် ထားရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ပါးသူများအလင်းပြပေးခြင်း၌ အကျိုးမရှိပါဟု ဆိုလိုသောအဓိပ္ပါယ်မဟုတ်ပါ။
ဗုဒ္ဓဟူး နိုဝင်ဘာ ၆ နိုဝင်ဘာ ၆
ဧဇရမှ ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့် (တိုရပ် ကျမ်း) လူအပေါင်းတို့သည် မတ်တတ်ရပ်လာကြသည်။ တိုရပ်ကျမ်းကို ဧဇရသည်မဖတ်ကြားမီ ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်တော်ကို ဦးစွာချီးမွမ်း၏။ ‘တိုရပ်’ ကျမ်းကိုဖတ်ရွတ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါ လူအပေါင်းတို့သည်လည်း ‘အာမင်’ ဟုတညီတညွတ်တည်း အာမင်၊ အာမင်ဟု (နေဟမိ ၈း၅၊၆) လက်ကိုမြှောက် ၍ရွတ်ဆိုကြသည်။ လူအားလုံးတို့သည် ဦးညွတ်လျက်၊ မျက်နှာကိုမြေကြီး နှင့်ထိတွေ့သည်အထိ ထာဝရဘုရားကိုလေးမြတ်ဦးတိုက်ကြ၏။
နေဟမိ ၈း၉-၁၂ ကိုဖတ်ပါ။ ခေါင်းဆောင်များတို့သည် လူများ အား ‘ငိြုွေကးမြည်တမ်းခြင်းမြုပ’ ရန်အဘယ်ကြောင့်ပြောကြားသနည်း။
ထိုသို့ဖြစ်၍ နောက်ပိုင်းနှစ်များ၌ ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို ဖတ်ရွတ်သောအချိန်တိုင်းတွင် ဗာဗုလုန်မှယေရုရှလင်သို့ပြန်ခဲ့ရသော ပြည်တော် ပြန်လူမျိုးတို့သည် မိမိတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များအတွက် ငိြုွေကးမြည်တမ်း ကြ၏။ ကြင်နာသောစကားသံဖြင့် ‘ငိြုွေကးခြင်းမြုပကြနှင့်။. . . သွားကြ လော့၊ မြိန်စွာသောအစာကိုစားကြလော့။ ချိုသောအရည်ကိုသောက်ကြလော့။ ဆင်းရဲသောသူတို့အားမျှဝေကြလော့။ ဤနေ့ရက်သည် ငါတို့ဘုရားရှင်အဖို့ သန့်ရှင်း၏။ ဝမ်းမနည်းကြနှင့်။ ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောအခွင့်နှင့် အားယူ ၍ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဟု လူအပေါင်းတို့အားဆိုကြ၏’ (နေဟမိ ၈း၉၊၁၀)။ Ellen G. White, The Ministry of Healing, p. 281.
လူများတို့သည် ဘုရားရှင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာပြီးနောက် မိမိတို့၌ရှိသောအပြစ်အတွက်ဝမ်းနည်းကာ စတင်ငိြုွေကးတော့သည်။ ထာဝရ ဘုရားသည် ထင်ရှားလာသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှင်၏ပြည့်ဝသော မေတ္တာတော်၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ ကရုဏာတော်၊ သစ္စာတည်ခြင်းများကို မြင်တွေ့ရပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းခြင်း၊ မထိုက်တန်ခြင်းများကိုနားလည်ပြီး ရှေ့တော်မှောက်သို့လာရန်လိုကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။ ဘုရားရှင်သန့်ရှင်းတော် မူခြင်းကို နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သိရ၍ ကျွန်ုပ်တို့အလင်းသစ်ကိုရရှိလာသည်။ ထိုမှန်ကန်သောနောင်တကြောင့် ဣသရေလလူတို့သည် ငိြုွေကးမြည်တမ်းကြ ၏။ သို့သော် ဝမ်းနည်းရန်မလို၊ ‘ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောအခွင့်နှင့် အားယူ၍ဝမ်းမြောက်ကြလော့’ (နေဟမိ ၈း၁၀)။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် အားနည်းခြင်းကိုမေ့ပျောက်ပစ်ပြီး ထာဝရဘုရား၏တန်ခိုးတော်၌ ကိုးစား ယုံကြည်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ထိုနေ့သည်လည်း အထူးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောနေ့၊ တံပိုးမှုတ်ပွဲနေ့ (ရို့ရ်ှဟပ်ရှဲနာ့) (Rosh Hashanah) တံပိုးများမှ မှုတ်သံကို ကြားရသည်နှင့် မိမိတို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ၏တရားစီရင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရန် မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ရမည်။ အပြစ်ဖြေရာနေ့ ကို (Tishri) လ၏ဆယ်ရက်မြောက်နေ့၌ကျင်းပသည်။ တံပိုးမှုတ်သံသည် လူအများဘုရားရှင်၏ရှေ့တော်၌ထပြီး နောင်တစိတ်ရရှိရန် သင်္ကေတဖြစ် သည်။ ထိုနေ့သည် လူများဘုရားရှင်ထံပြန်လာရန် တမင်စီစဉ်ထားသည်။ ငိြုွေကးခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်းများကို နားလည်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် ဦးစီး ဦးဆောင်သူများက သူတို့အားသတိပေးချက်မှာ၊ နောင်တရသည်နှင့်တစ်ြုပိင်နက် ဘုရားသခင်သိမြင်တော်မူပြီဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်ကြားသိပြီဖြစ်သည်။ ထိုအတွက် ကြောင့် ငိြုွေကးဝမ်းနည်းနေမည့်အစား၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရပြီဖြစ်သောကြောင့် ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ကြရန်ဖြစ်သည်။
အပြစ်မည်မျှဆိုးရွားသည်ကို ယေရှုရှင်သည် ကပ်တိုင်ပေါ်၌အသေခံ ကာ ပြဿနာအလုံးစုံကိုဖြေရှင်းပေးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၌မျှော်လင့်ချက်ကို ပေးနေပါသလား။
ကြာသပတေး နိုဝင်ဘာ ၇
‘ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောအခွင့်နှင့် အားယူ၍ဝမ်းမြောက်ကြ လော့’ (နေဟမိ ၈း၁၀) ဟူသောကျမ်းချက်သည် ဘုရားသခင်မှကျွန်ုပ်တို့ကို ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ရွှင်လန်းခြင်းရှိရန် အလိုတော်ရှိသည်ကိုဖော်ပြသည်။ အခြား သောရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းမျိုးနှင့်မတူဘဲ၊ ဘုရားရှင်၏မေတ္တာတော်ကိုသိရ သော ဝမ်းမြောက်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရား၌ရွှင်လန်းခြင်းရှိသည်ဆို သည်မှာ ကိုယ်တော်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသိရ၍ ဝမ်းမြောက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာကို ဘုရားသခင်သည် အလုံးစုံသောပြင်ဆင်ပေးမှုကို စီမံထားပေးပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရမည့် နေ့စဉ် အသက်တာအခက်အခဲကို ကိုယ်တော်ဖြေရှင်းပေးနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုထက်ပို၍ ထာဝရဘုရား၌ရွှင်လန်းခြင်းသည် ခွန်အားကိုဖြစ်စေ၍၊ နေ့စဉ် တွြေု့ကံရမည့်လမ်းခရီးအခက်အခဲအားလုံးကို ကျော်လွှားသွားနိုင်သည်။
နေဟမိ ၈း၁၃-၁၈ ကိုဖတ်ပါ။ မည်သို့အကြောင်းရှိသနည်း။ ယင်းနောက် လူတွေ၏အကြောင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်များအကြောင်းကို မည်သို့ ပြောထားသနည်း။
နောက်တစ်နေ့တွင် ခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲများသည် ဧဇရထံသို့ ရောက်လာကြသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို သင်ယူ လေ့လာရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသောမြင်ကွင်းအရ၊ ခေါင်းဆောင်များ တို့သည် ဘုရားရှင်၏အထံတော်သို့ မိမိတို့၏လူမျိုးကိုပို့ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိ ကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။ လူများကိုနည်းမှန်လမ်းမှန်ပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်၏ထံမှဥာဏ်ပညာနှင့် ဘုရားရှင်ကိုမှီခိုခြင်းမရှိပါက လုံးဝမဖြစ် နိုင်ကြောင်းကို ကောင်းစွာနားလည်ထားကြသည်။
ဝတ် ၂၃း၃၉-၄၃ ကိုဖတ်ပါ။ ဣသရေလလူများ မည်သည့်အမှု ကြိုပရမည်ဟု အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်သနည်း။ အဘယ်အတွက်ကြောင့်နည်း။
နေဟမိ ၈း၁၅ ကိုဖတ်ရှုမှတ်သားပြီး၊ ကျမ်းချက်၏ဆိုလိုချက်မှာ လုပ်ဆောင်မည့်အရာမှန်သမျှ နှုတ်ကပတ်တော်မှရေးသားချက်အတိုင်းဖြစ်ရ မည်ဟုပါရှိသည်။ အခြားသောပုံနမူနာတစ်ခုမှာ သူတို့သည် ထာဝရဘုရား ၏စကားတော်ကိုနာခံရန် အထူးအလေးထား၍အလိုရှိနေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်၊ သိမ်းယူခြင်းခံရပြီးနောက် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း နားထောင်မှုမရှိ ခြင်း၏အကျိုးရလဒ်ကို သင်ယူမိပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဝတ်ြုပရာကျမ်း တွင်ဖော်ပြသောကျမ်းချက်များ၌လည်း သူတို့သည် ပွဲများကျင်းပကာ၊ ‘ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးရွှင်လန်းခြင်းကြိုပကြ ၏’ (ဝတ် ၂၃း၄၀)။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ ကယ်တင်ခြင်း၏ကျေးဇူးကရုဏာ တော်အကြောင်းကိုသတိရလျက် ဘုရားရှင်၏ြုပတော်မူသောကျေးဇူးကို ချီးမွမ်း လျက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြသည်။
ယေရှုရှင်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘယ်အရာပေးထားကြောင်းကို တွေးဆကြည့်ပါ။ ယေရှုသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများကျင်းပသောပွဲတော် များအားလုံး၏ပုံဆောင်မှု၏အရှင်ပင်ဖြစ်သည်။ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းများ ပြင်းထန်ခက်ခဲစွာရင်ဆိုင်ရချိန်၌ သခင်ဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ပြီး ဝမ်းမြောက် ရွှင်လန်းခြင်းစိတ်ရှိနိုင်ရန် မည်သို့သင်ယူနိုင်မည်နည်း။ အဘယ်ကြောင့်ယခု လိုမျိုးနောက်ဆုံးကာလ၌ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အထူးသတြိုပလုပ်ဆောင်ရန် သင်ခန်းစာဖြစ်နေပါသနည်း။
သောကြာ နိုဝင်ဘာ ၈
အယ်လင်ဂျီဝှိုက်၏ပုရောဖက်နှင့်ဘုရင်များစာအုပ်မှ စာမျက်နှာ ၆၆၁- ၆၆၈ တွင် “Instructed in the Law of God” ခေါင်းစဉ်ပါအကြောင်းကို ရှာဖွေဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
‘ယခုတွင်သူတို့သည် ကိုယ်တော်၏ကတိတော်၌ မိမိတို့၏ယုံကြည် ခြင်းကိုပြသရမည့်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်သည် သူတို့၏ နောင်တမျက်ရည်ကို လက်ခံတော်မူပြီ။ အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရပြီဖြစ်ကြောင်း သေချာစွာသိရှိရပြီးနောက် ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းအပြည့်အဝဖြင့် ဘုရားသခင် မှသူတို့အား ပြန်လည်ခိုင်မြဲစေကြောင်းကိုပြသရန်ဖြစ်သည်။
ဘုရားရှင်ထံတော်သို့ စစ်မှန်သောနောင်တဖြင့်ပြန်လာသူတိုင်းကို အသက်တာတစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းအခွင့်ကိုရစေပါသည်။ အပြစ် သားများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အုပ်စိုးမှုကိုခံယူလျှင် မိမိတို့၏ အားနည်းခြင်းမပြည့်စုံမှုများကိုသိမြင်ပြီး၊ သန့်ရှင်းသောသဘောနှလုံးသွင်းကာ ကြီးမြတ်သောအောင်မြင်မှုရရှိသွားသည်။ မိမိကိုယ်ကိုပညတ်ချိုးဖောက်သူအဖြစ် မြင်တွေ့ပြီးသည်နောက် ဘုရားရှင်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရယူကာ လြုံခံသော အသက်တာသို့ဝင်ရောက်ခိုလှုံရသည်။ အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရသောကြောင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်နှင့် ခမည်းတော်ဘုရား၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းမေတ္တာတော် အကြောင်းကိုသဘောပေါက်ကာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ခြင်းရရှိသည်။ နောင်တရ ၍ ကိုယ်တော်၏မေတ္တာတော်အရိပ်ပြန်၍ခိုလှုံလာသူတိုင်းကို ဘုရားရှင်သည် မိမိ၏ဘုန်းတန်ခိုးတော်ဖြင့် ပတ်ရစ်ဝန်းရံစေသည်။ အနာရှိသမျှကိုကုစား စည်းပေးကာ အပြစ်အားလုံးကိုဆေးကြောပစ်လိုက်သည်။ ထိုနောက်တွင် ကယ်တင်ခြင်း၏ဝတ်ရုံတော်ဖြင့် လွှမ်ြးုခံဝတ်ဆင်စေသည်။’ Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 668.
Taggedlesson64q19myanmar ssl
Previous Article PATHIAN THU AN CHHIAR l6
Next Article MAWH MAISAKPA PASIAN l7